GeoConverter wuxuu ogolaanayaa unugyada adag ee isku xirka nidaamka 'XSD' - Geofumadas
GeoConverter waxay kuu oggolaaneysaa inaad xakameyso nudaha adag ee nidaamka XSD
Abriil, 2013 Geospatial - GIS
Maalin kasta isbedelka ku saabsan qaabaynta qaabdhismeedka Kaabayaasha Xogta Xannibaadda ayaa joogsada inuu ahaado qiiq astral ah, waxayna u noqdeen caqabado la gaari karo kuwa u hibeeyay duurka joomatic.
Dhanka Spain, lifaaqa I - Joqoraafi ahaan Magacyada ay Machadka Juquraafi ahaan ku qeexday la-waafajinta shuruucda INSPIRE, waxay muujineysaa waxa hay'adaha dowliga ah iyo dadaallada gaarka loo leeyahay ay tahay inay u dhigmaan macluumaadkooda heerarka is-weydaarsiga ee ay raacday aragtidan ku dhawaad ​​is dhexgalka qaaradda.
Waxaan had iyo jeer na garaacnay aragtida Geobide, iyagoo isku dayaya inay la galaan aaladaha dadka waxay ku qabtaan waxa la wadaago codsiyada gaarka ah ama kuwa bilaashka ah. Faa'iidadeeda ugu weyni waa ka faa iideysiga baahiyaha shirkadaha iyo shakhsiyaadka, gaar ahaan Isbaanishka, oo ku saleysan suuq suuxsan oo aan lahayn iibinta aalad kale si ay u sameystaan ​​sheybaarada, waxaa jira dad badan oo ka mid ah suuqa laakiin xalalka gaarka ah ee hooseeya ilaa heer muuqata oo fudud, Waa inay noqotaa geofumar.
Sida ku saabsan dhinacyada aan horay u soo mariney, in kasta oo aanan dib u eegis ku samaynayn qeybta si nidaamsan:
Isuduwid Isuduwaha Nidaamka
Dhexgalka xogta OGC
Is dhexgalka CONDOR
Albaabka laga galo xogta CAD / GIS
Ku soo noqo dulucda la-qabsiga qaabkii INSPIRE, shaqadii uu qabtay waa mid xiiso leh GeoConverter, wax soo saarka garaafka ah ee loogu talagalay faylalka GML ee loogu talagalay barnaamijyada XSD INSPIRE, taas oo aad ku xirato qanjidhada XML gudaha barnaamijyada XSD.
Waxa jira qaybo dad ah oo gaar ah oo leh diiniyado rasmi ah oo kaladuwan oo luqado kala duwan leh. INSPIRE waxaa loo arkaa inuu yahay fasalka koowaad Magaca la magac baxay, taas gudaheedana waad / ku soo bandhigi kartaa isla'egyadaas kaladuwan fasallo kaladuwan Juqraafi ahaanName Geoconverter wuxuu kuu oggolaanayaa inaad sameyso habka nuqula dhammaan qeybaha nidaamka XSD, si magacyada rasmiga ah ee kaladuwan ee loo yaqaan luuqadaha ay uga muuqdaan natiijada ugu dambeysa.
Waxa kale oo aad ka heli kartaa waxyaabo aan macluumaad ku lahayn dhammaan diimaha rasmiga ah. Geoconverter wuxuu kuu oggolaanayaa inaad geliso qaacido shuruudo shuruudaysan oo keliya aad ku abuuri karto fasalka Juqraafi ahaanName haddii diiwaanku leeyahay lahaanshaha rasmiga ah.
Tan darteed, waxaa lagu sameeyaa nidaamka caadiga ah ee abuurista faylalka 'CAD / GIS', iyada oo la xulanayo qorshe hawleed (XSD), oo aan ahayn wax kabadan faylka xml oo leh qaabab qaabaysan oo qeexaya astaamaha lakabka la qabsan doono.
Markaa, intii la qeexi lahaa astaamo kasta oo la xidhiidha nidaamka 'INSPIRE', waxa ay qabataa waa isku shaandhayn ay ku sameyso tusaale kale oo ku jira dukumintiga wax soo saarka. Waxaa kale oo suuragal ah in meesha laga saaro ama lagu meeleeyo muujinta isbadalka.
Post Previous«Previous MundoGEO # Connect 2013, wax walbana waa diyaar
Post Next gvSIG 2.0 iyo Maareynta Khatarta: Shabakada webka ee 2 ayaa soo socotaNext »